आवश्यक: क्रिसमस आईटमहरूको महान प्याक I 19 | क्रिएटिव अनलाइन
मानुएल रामीरेज | | छविहरू, पुनरावृत्त, कार्टुन भेक्टर
हामी ती क्रिष्टमस प्याकहरू मध्ये अर्कोसँग फर्केका छौं जुनसँग तपाईंको स्रोतहरूको मजा लिन र विस्तार गर्न क्रिसमस ग्रीटिंग कार्डहरू बनाउन, पोस्टकार्डहरू पठाउन वा ती DIY सँग तपाईंको घर सजिलैसँग सजाउन सक्षम हुन। हामीसँग अहिले १,1.800०० भन्दा बढी क्रिसमस वस्तुहरू छन् केवल designs 19 को लागि तपाइँको डिजाइनहरूको लागि।
हो, तपाईंले यसलाई पढ्नु भएको रूपमा। अन्य ती अपूरणीय प्रस्तावहरूको जससँग क्रिसमससँग सम्बन्धित सामग्री विस्तार गर्ने र यसले तपाईंलाई धेरै लचिलो हुन अनुमति दिनेछ जब ग्राहकहरूको विविध प्रकारको बजेट दिन आउँछ। यदि तपाईं पनि ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले सामान्यतया जीवन खोज्दछन्, त्यहाँ धेरै ती १ dollars डलरहरू छैनन् एक प्रिय व्यक्तिलाई ठूलो भिन्नताको उपहार दिन, त्यसो भए, अगाडि बढ्नुहोस्!
यहाँ बन्डल किन्नुहोस् केवल १ dollars डलर को लागी
1 भारी गुणवत्ता को एक महान प्याक
2 Cuckoos सिमलेस वेक्टर पृष्ठभूमि
3 पीएनजीमा क्रिसमस उल्लूहरू
4 लाइटरूमका लागि 620२० प्रिसेटहरू
6 २260० रंगीन क्रिसमस पृष्ठभूमि
7 १०० क्रिसमस तहहरू
8 २ Christmas क्रिसमसको लागि न्यूनतम रूखहरू
9 Lay तहयुक्त क्रिसमस PSD
10 २ copper तामा स्नोफ्लेक्स
11 २ gold सुन स्नोफ्लेक्स
12 ग्रंज र धातुई क्रिसमस
13 क्रमबद्ध हिमपात
भारी गुणवत्ता को एक महान प्याक
तपाईंले यस प्याकमा फेला पार्नुहुने प्रत्येक सामग्रीलाई हाइलाइट गर्नु अघि, हामीलाई भन्नु पर्ने छ कि यसको धेरै ग्राफिक्स र चित्रण को भारी गुणवत्ता को हो। त्यो हो, तिनीहरू २०१ 2018 मा बनेको क्रिसमस ग्रीटिंग कार्डबाट २०१ expected मा अगाडि बढ्नको लागि आज अपेक्षा गरिएको कुरासँग बराबर छन्।
यो लगभग असीम भण्डार हो क्रिसमस भित्र सबै प्रकारका कोटिहरू स collect्कलन गर्नुहोस्। सान्ता क्लॉज, क्रिसमस रूखहरू, हिउँ स्कीइ,, आफ्नै चित्रहरू, यी मितिहरूका विशिष्ट जनावरहरू जस्तै रेनडिअर वा उपहार बक्सहरूको तस्बिरहरू धेरै राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ र यसले तपाईंलाई सामाजिक नेटवर्कमा उभिन मद्दत गर्दछ।
यो एक छ लगभग अनन्त धेरै वर्तमान क्रिसमस प्याक र जससँग केहि पनि अभाव छैन। यसको सामग्री निम्न प्रकारको छ:
२० भेक्टर चित्रण।
पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ PNG ढाँचामा १० चित्रण।
La 36 स्तरित PSD वस्तुहरू.
पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ PNG ढाँचामा 408०XNUMX स्नोफ्लेक्स।
पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ २260० पृष्ठभूमि (अनावश्यक माफ गर्नुहोस्)।
पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ 450 तहहरू।
620२० लाइटरूम प्रिसेटहरू हामीसँग भएका ती सबै क्रिसमस फोटोग्राफहरू सुधार गर्न।
Cuckoos सिमलेस वेक्टर पृष्ठभूमि
भेक्टर ढाँचामा ती पारदर्शी पृष्ठभूमिहरूको बारेमा के भन्ने एक वैकल्पिक डिजाइन संग र धेरै फरक। यदि तपाईं आफ्नै लपेट्ने कागज सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, क्रिसमस कार्ड वा वालपेपर कागजको साथ तपाईंको घरको केही अंश सिर्जना गर्नुहोस्, यी भेक्टर चित्रण उत्तम भन्दा बढि छन्।
डिजाइन धेरै वैकल्पिक हो र प्रमुख रंग गुलाबी हो। यो फरक पार्छ जे भए पनि क्रिष्टमस रूखहरू र ती स्टारहरूसँग जुन तिनीहरूलाई लगभग अनौंठो डिजाइनहरू बनाउँदछ। यदि तपाईं भिन्न हुन चाहनुहुन्छ र तपाईंको ग्राहकलाई त्यो विशेष स्पर्शले अचम्मित बनाउँन चाहानुहुन्छ भने, भेक्टरमा दृष्टान्तहरूको यो प्याक यस प्याकको उत्तम हो।
यस प्याक को लागी पारदर्शी पृष्ठभूमि मा उपलब्ध छ एआई, EPS र SVG ढाँचा; अर्को शब्दहरु मा, ती तपाइँको वेबसाइट को वजन मा न्यूनतम लोडिंग प्रभाव पैदा गर्न सक्दछ यदि तपाइँलाई लगभग बस किलोबाइट्स को भेक्टर ढाँचा लोड गर्न कसरी थाहा छ।
पीएनजीमा क्रिसमस उल्लूहरू
यस प्याकमा भिन्नता प्राप्त सामग्रीको अर्को क्रिसमस उल्लूको हो। उल्लू कोयलको श्रृंखला छ जुन हामी सबै प्रकारका ती पाउन सक्छौं ती आँखाहरू एक अर्काको नजिक उभिएर। तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको उद्देश्यमा लैजानु सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू मुख्य पात्र बन्नेछन्।
त्यहाँ संग छन् क्रिसमस टोपी, एन्जेलिक पखेटा संग, एक रेनडिअरको सीsहरूसँग वा उनीहरूको अर्को टोपीको साथ जुन चिसोले कानबाट बाहिर निकाल्दछ। तपाईं उनीहरूलाई धेरै फरक पोसामा मिलाउन सक्षम हुनुहुनेछ ताकि ती राम्रा सावधानीपूर्वक चित्रको साथ एक रमाइलो दृष्टान्त बन्नेछन्।
कुलमा त्यहाँ PNG ढाँचामा १० प्यारा उल्लुहरू छन् जुन अत्यावश्यक पारदर्शी पृष्ठभूमिका लागि फोटोशपबाट उनीहरूसँग काम गर्न सक्षम हुनुहोस् वा ती अफिनिटी प्रोग्रामहरू जुन यति सफल भइरहेका छन्। हामी तपाईंलाई सम्झाउछौं कि उल्लूको यस प्याकमा उनीहरूको अनुहारको सबै भन्दा भावपूर्ण तत्वहरू समावेश छन्। त्यो हो, तिनीहरूको आँखा, चुच्चो र तिनीहरूका कपडाका ती सजावटी तत्वहरू ताकि तपाईं आफ्नो उल्लूलाई "निर्माण" गर्न सक्नुहुनेछ।
लाइटरूमका लागि 620२० प्रिसेटहरू
लाइटरूम छ फोटो रिचचिंगको लागि एक आवश्यक कार्यक्रम बन्नुहोस्। र यद्यपि हामी हाम्रो जीवनको समयको केही अंश उपभोग गर्न सक्दछौं यी प्रिसेटहरू अनुकूलित गर्न सबै प्रकारका परिणामहरू खोज्न वा त्यो जोड दिन हाम्रो स्मार्टफोन वा निकोनको साथ लिइएको फोटोको चियर्सोस्कुरो, सत्य यो हो कि प्रिसेटको शृंखला मालिकको उत्पादनको कार्य गर्दछ। धेरै सजिलो। उच्च गुणवत्ता छविहरू।
यो त्यहीं हो जहाँ लाइटरूमका लागि 620२० प्रिसेटहरू यस महान क्रिसमस प्याकमा आउँदछन्। ती सबैको विचार हो ती क्रिसमस फोटोहरूमा जोड दिनुहोस् ताकि तिनीहरू चमकदार छन् र ती मितिहरूमा जोडिएको छ कि जादुई स्पर्श। हामीसँग तिनीहरूसँग एक ठूलो विविधता छ र यहाँ तपाईं एक छवि फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई लाइटरूमका लागि ती प्रीसेटहरूसँग "अघि" "पछि" पछि "बनाइएको" भन्ने ठूलो परिवर्तन देखाउँदछ।
भनौं प्रिसेट्स वा फिल्टरहरू क्रिसमसको फोटो बनाउनका लागि बनाइएको छ धेरै राम्रो देखिन्छ। तपाईंले केही बीचमा प्रयास गर्नुपर्नेछ जब सम्म तपाईंले त्यो फोटोलाई सबैभन्दा राम्रो सूट भेट्टाउनुहुन्न।
सक्षम छन् केहि presets राम्रो सन्तुलन प्रदान गर्न फोटो पूरै संतृप्त गर्नुहोस् रंग दिनुहोस् वा ती लाइटहरूको जादुई हेलो हाइलाइट गर्नुहोस् जुन हाम्रो क्रिष्टमस रूखहरू सजावट गर्दछ। त्यहाँ सबै कारणका लागि छन्, त्यसैले हामी क्रिसमसको लागि यस प्याकको केन्द्रीय पोइन्ट मध्ये एक सामना गर्दैछौं कि तपाईं यसलाई १ dollars डलरमा लिन सक्नुहुन्छ। यस विशेष वर्षको समयको लागि तपाईंको विशेष सामग्री विस्तार गर्न एक ठूलो प्रस्ताव।
र यो एमा हराउन सक्दैन यस प्रकृति को प्याक स्नोफ्लेक्स के हो? स्नोफ्लेक्स जुन कुनै पनि डिजाइन कार्यका लागि उत्तम हुन्छन् र हामीलाई तीनिहरू बिभिन्न आकार, र and र डिजाइनहरूमा अक्सर आवश्यक हुन्छ।
कुलमा तिनीहरू छन् हामीसँग स्नोफ्लेक्सको २ 250० तहहरू छन् क्रिसमस को लागि यो महान प्याक मा। तिनीहरू d००px X 5.000२x px को d००dpi को गहिराइमा रिजोलुसनको रूपमा रहेको विशेषता हो। त्यो हो, तिनीहरू पूर्ण रूप धारिलो देखिन्छन् यदि हामी तिनीहरूलाई 3.325 x 300 पिक्सेल पोस्टकार्डमा प्रयोग गर्दछौं। तिनीहरू colors र colorsहरूमा पनि उपलब्ध छन् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई ती कार्यहरूमा जोड्नुहोस् जुन तपाईं यी क्रिष्टमस दिनहरूको लागि गर्नुहुनेछ।
हामी तपाईको तस्वीरहरुमा देख्न सक्छौं हामी साझेदारी गर्छौं तिनीहरू प्रत्येकमा डराउँछन्। त्यसोभए यो यो ठूलो प्याकको केन्द्रीय पोइन्ट्स हो।
२260० रंगीन क्रिसमस पृष्ठभूमि
हामी अब एक मा बारी यस क्रिसमसको लागि रंगीन र उज्यालो पृष्ठभूमिको श्रृंखला। कुलमा त्यहाँ २260० छन् र हामी ती सबै सम्भावित आकारहरू, डिजाइनहरू र रंगहरूको ठूलो फ्यूजनमा पाउँदछौं जसले क्रिसमसको ग्रीटिंग कार्ड प्राप्त गर्नेहरूको ध्यान शक्तिशाली ढ attract्गले आकर्षित गर्छन्।
सत्य यो हो कि यससँग केही फन्डहरू प्राप्त गर्न उत्कृष्ट भण्डार छ जसमा मोडेलहरू देखा पर्दछ, त्यसैले ती कार्यहरू जुन हामीसँग एउटा कार्यक्रम वा क्रिसमस पार्टी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, ती आदर्श भन्दा बढी हुन्। बाँकी सामग्री जस्तै, तिनीहरू उच्च रिजोलुसनमा उपस्थित छन् र पूर्ण रूपमा परिभाषित छन्; यदि उनीहरूसँग जे भए पनि प्रिन्टि press प्रेसमा लगेर हेर्नुहोस् केहि क्लबको अगाडिको ढोकामा हामीद्वारा डिजाइन गरिएको त्यो पोस्टर वा स्थानीय पार्टी।
१०० क्रिसमस तहहरू
यी क्रिसमस क्याप्सले सरासर भएर ठूलो प्रभाव पार्छ। छ मानौं ब्रशको साथ पेन्टि। जसमा हिउँ ड्र draw र पेन्ट गर्न सामग्री थियो, त्यसैले तपाईंसँग यसको उत्तम फिनिशको एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
ती तहहरू सबै सम्भावित तरिकाहरूमा अवस्थित छन् र धेरैले चिठीहरू पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन् ताकि हाम्रो रचनात्मकताको लागि धन्यवाद हामी त्यसलाई ती अभिवादन कार्डहरूमा वा वर्षको अन्त्यको लागि त्यो क्रिसमस पोस्टरमा ठाउँ दिन सक्दछौं।
संकल्प हो ,,4.500०० px x ,,4.500०० px 300 dpi को गहिराई संग।
२ Christmas क्रिसमसको लागि न्यूनतम रूखहरू
यस प्याकसँगै सम्पन्न गरिएको अर्को अर्को महान विचारहरू एकीकृत भइरहेको छ न्यूनतम क्रिसमस रूखहरू। तिनीहरू थ्रीडी रूखहरू हुन् जुन ती छाया र थोरै न्यूनतम डिजाइनको साथ पृष्ठभूमि अनुकरण गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि केही महान फर्निचर डिजाइनरले माया जस्तो प्रोग्राम लिए र राम्रो समय खर्च गरे जुन उसले खास क्रिसमस रूखको रूपमा बुझ्छ।
यदि तपाईं ग्रीटिंग कार्डका लागि विशेष र अद्वितीय केहि खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको समर्पण आवश्यक छ, यी २ min मिनिमलवादी रूखहरू उत्कृष्ट भन्दा बाहिरका छन्। हामी एक संकल्पको साथ PSD फाईलहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं ,,4.650० पिक्सेल x 3.125,१२300 px र गहिराई DP००DPI.
Lay तहयुक्त क्रिसमस PSD
यस प्याकलाई छुट्याउने अर्को डिजाइनहरू यी PSD पीएसई फाईलहरू हुन् जुन हामीले भण्डारहरूको केहि सजावटहरू सजिलैसँग सजाउन सक्दछौं जुन यस समयमा हामी खोज्दै छौंभन्न अरूलाई पनि भेट्न सकिन्छ। यो लगभग एक छ मफिनहरू नुस्खा पूर्ण रूपमा मिठाईयुक्त र जसमा गुलाबी र पेस्टल रंगहरू तिनीहरूको रंग प्यालेटमा प्रबल हुन्छ।
तिनीहरू थ्रीडीमा बनेका छन्, त्यस्तै छन् महान यथार्थवादको साथ प्रदान गरिएको। त्यो हो, हामी तिनीहरूलाई यथार्थपरक फोटोग्राफहरूको साथ पूर्ण रूपमा मिलाउन सक्दछौं जुनमा हामीसँग कुनै सजावटी वस्तु वा हाम्रो भान्छा मुख्य तत्वको रूपमा छ। धेरै उत्कृष्ट र यसले क्रिष्टमसको लागि यस प्याकको सम्पूर्ण सेटमा गुणस्तरको एक धेरै थप गर्दछ।
२ copper तामा स्नोफ्लेक्स
हिमफ्लाक्सको यो श्रृंखलालाई सामग्रीले चित्रण गर्दछ। र सत्य हो कि तिनीहरू एक गम्भीर संग महान भव्य हो भनेर भन्नु पर्छ बेतहाती हडताल चमकदार तामा शेडहरू.
स्नोफ्लेक्सको अर्को सेटले सम्पूर्ण सेटमा आफैंमा गुणस्तर थप गर्दछ। छन् विभिन्न आकार, मोटाई र बनावट को २ snow स्नोफ्लेक्सयद्यपि तिनीहरू सबैसँग त्यो बिन्दु समान हुन्छ जुन तामा हो। यदि हामी तिनीहरूलाई अरू सजावटी तत्त्वहरूको साथ मिलाउन सक्दछौं यसले भिन्न र विशेष ग्रीटिंग कार्डमा ल्याउन सक्छ, त्यसैले यसमा थोरै मात्र काम गरौं।
२ gold सुन स्नोफ्लेक्स
अघिल्लो प्याकको साथ ठूलो भिन्नता भनेको प्रतिनिधित्व गरिएको सामग्री हो: सुन। तिनीहरू 6.500 px X 6.500 PX को आयाम र 300 DPI को गहिराई द्वारा विशेषता हो।
साथै तिनीहरूको डिजाइन धेरै राम्रो छ र तिनीहरू जुन तीसँग स्नोफ्लेक्स हुन सक्षम छन् केहि क्रिसमस आकृति सजावट। यो विभिन्न ग्राहकहरूको लागि तपाइँको कामको सजावटको लागि उत्तम ठाउँ कसरी फेला पार्ने भनेर थाहा पाउनुहुनेछ।
ग्रंज र धातुई क्रिसमस
अन्य प्याकहरूमा जुन हामीले यी अवसरहरू केही अवसरहरूमा ल्याएका छौं, हामीसँग ग्रन्ज सम्बन्धित दुई प्याकहरू छन् र धातु वा भारी धातु। तिनीहरू प्रयोग गरिएको बनावट र ती स्लाइडिंग सामग्रीद्वारा भिन्न छन् जुन अन्य प्रकारको प्रस्तुतीकरणहरूलाई जन्म दिन्छ। यस क्रिष्टमस प्याकमा अर्को ठूलो अतिरिक्त छ कि यदि हामीसँग $ १ have यसको लागत छ भने छुटाउन सकिन्न।
एकातिर २ 24 ,,4.500०० x ,,4.500०० px ग्रन्ज स्नोफ्लेक्स, 300DPI गहिराइ र colors रंगहरू। जबकि धातुहरू DP,००० x ,4,००० पिक्सेलमा DP००DPI गहिराइमा जान्छन्। अह, 4.000 रंगहरू तिनीहरूलाई फरक गर्न र तिनीहरूलाई हामीलाई उपयुक्त को रूप मा प्रयोग गर्नुहोस्।
हामीले स्नोफ्लेक प्याकहरूको अर्को श्रृंखला समाप्त गर्यौं तिनीहरू ती सेता र प्राचीनबाट जान्छन् ती बढि उल्लेखनीय र ती क्रिसमस स्वरूपहरूमा एक अधिक भविष्यवाणी गर्न को लागी जो। त्यहाँ हामीसँग कालाहरू पनि छन् जब हामीसँग एक आफन्त छ जो टिम बर्टन फिल्महरूको लागि रोज्छ।
यदि तपाईंलाई स्रोतहरू मनपर्‍यो भने तपाई सम्पूर्ण प्याक १ dollars डलरमा मात्र किन्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क
छोटकरीमा,aक्रिष्टमस तत्वहरूको महान प्याकको साथ हामी केहि पनि याद गर्दैनौं ती सबै बधाईहरूलाई सजाउन, ती कागजातहरू जुन कागजमा उपहार हुन् वा त्यो पोस्टर जसको साथमा एक साथीले वर्षको अन्तको लागि पार्टी पीट गरोस् भन्ने चाहन्छ। यदि तपाईं आफ्नो सामग्री मा सामग्री को एक विस्तृत श्रृंखला र अधिक लचिलो हुन चाहनुहुन्छ भने, यो प्याक मात्र आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » तपाईको डिजाइनका लागि १ .18.00 ० भन्दा बढि क्रिसमस तत्वहरू।